I just wanna save you!!Please have mercy on me!!! - Part 8 - Wattpad
946 165 1
မိုးဖွဲလေးများမကြာခဏရွာလေ့ရှိသော မိုးရာသီဖြစ်သော်လည်း ယနေ့တွင်နေသာကာ ရာသီဥတုသာယာလျက်ရှိသည်။ "ဟွား"ဆိုသည့် စာလုံးထင်းထင်းပါသော မိုးမျှော်အဆောက်အအုံကြီး၏ရုံးခန်းတွင် CEOပေါက်စ ပိုင်ချင်းယွီ အလုပ်ကြိုးစားနေသည်။
ပိုင်မိသားစုပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ့ဖြစ်သည့်တိုင် "ဟွား"ဟူသောအမည်နာမ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရလဲ ဆိုလျှင် ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်သူ ပိုင်မိသားစု၏ဘိုးဘေးသည်
ကုမ္ပဏီနာမည်ကို ဇနီး၏အမည်နာမထဲမှဟွားဟူသောစကားလုံးကိုယူခဲ့သည်ဟုသိရသည်။တနည်းအားဖြင့် ဟွားဆိုသည့်စကားလုံးသည် ပန်းဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ပိုင်ချင်းယွီ ထိုအကြောင်းကိုစသိစဥ်က ခွေးစာများစားလိုက်ရသလိုပင် ခံစားလိုက်ရသည်။အမှန်တကယ်လည်းခွေးစာ စားခဲ့ရပါသည်။
ထိုဘိုးဘေးတည်ထောင်ခဲ့စဥ်က ယခုကဲ့သို အဆောက်အအုံအမြင့်ကြီးတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။လုပ်ငန်းသေးသေးမှသည် သားစဥ်မြေးဆက်၏လက်ဆင့်ကမ်းတိုးချဲ့မှုကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်းများစွာချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဖြေးဖြေးကြီးမားလာကာ မူလပိုင်ချင်းယွီ၏ အဖိုးနှင့်အဖေလက်ထက်တွင် အလွန်အောင်မြင်ကျော်ကြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
သာမန်ကုမ္ပဏီများအသေးလေးများနှင့်မတူသည့်အတွက် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၏ဝန်လည်း ကြီးလှသည်။ဘွဲ့ရပြီးချက်ချင်းပင် CEOရာထူးအား ဦးလေးဖြစ်သူထံမှလွှဲယူခဲ့သည်။လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်သည့်အတွက် ကျောင်းမပြီးခင်ကပင် အလုပ်များအားကူလုပ်ကာ လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ဖတ်ခဲ့ရသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များသည် သူ့အရပ်လောက်ပင် ရှိနိုင်သည်။ဥာဏ်ကောင်းကာ သင်လွယ်တတ်လွယ်ဖြစ်အောင် မွေးပေးခဲ့သော ယခင်ဘဝမှမာတာမိခင်အား အလွန်ကျေးဇူးတင်မိသည်။လိုအပ်သောအကြံဥာဏ်များကို ဦးလေးဖူထံမှတောင်းယူကာ ဦးစီးလုပ်ဆောင်နေသော